Ziziphi iinqununu zaseLondon ezahlukileyo kunye nendlela ezisebenza ngayo
Amandla okusabalalisa eLondon amandla aphakathi kwe- atom ezimbini okanye i- molecule esondelelene komnye nomnye. Amandla yimbutho yamanzi eyenziwa yi- electron repulsion phakathi kwamafu e-electron e- atom ezimbini okanye i-molecule njengoko behamba.
Amandla aseMondon echithwa ngabantu ababuthathaka kakhulu yintliziyo ye- van der Waals kwaye iyinamandla eyenza i-athomu ezingenayo i- atom okanye i-molecule ukuba ixubane kwi- liquids okanye iziqulatho njengokushisa kwehla.
Nangona kubuthathaka, kwimizi emithathu ye-van der Waals (i-orientation, induction, ukusabalalisa), imikhosi yokusasazeka iqhelekile. Imbango yinkalo emancinci elula (eg, amanzi).
Amandla athola igama layo kuba uFritz waseLondon waqala uchaza indlela i-athomu zegesi ezinokuthi zithandwa ngayo ngo-1930. Inkcazo yakhe yayisekelwe kwingcamango yokutshatyalaliswa okwesibini.
Eyaziwa ngokuba: Iimpi zaseLondon, i-LDF, imikhosi yokusabalalisa, i-dipole force yangaphandle, ibangela i-dipole force. Iimpi zengxowankulu yaseLondon ngamanye amaxesha zibhekiswa ngokungaqhelekanga njengemikhosi ye-van der Waals.
Yintoni eyenza iForces iLespersion Forces?
Xa ucinga ngama-elektron ejikeleze i-athomu, mhlawumbi ucinga amachashaza amancinci ahambayo, avule ngokulinganayo kwi-nucleus ye-athomu. Nangona kunjalo, ii-electron zihlala zihamba, kwaye ngamanye amaxesha zikhona ngaphezulu kwicala elinye kwi-atom kunenye. Oku kwenzeka ngeenxa zonke nayiphi i-athomu, kodwa kuthethwa ngakumbi kwiimakhamla kuba i-electrons ivakalelwa ukutsala okukhangayo kwee-atoni ezakhelene.
Ama-electron avela kwii-atom ezimbini angalungiselelwa ukuba avelise iipopol zombane zesikhashana (zangaphandle). Nangona ukugqithiswa kwexeshana kwesikhashana, kwanele ukuchaphazela indlela i-atom kunye nama-molecule asebenzisana ngayo.
I-London Dispersion Force Facts
Imikhosi yokusasazeka ivela phakathi kwama-athomu kunye nama-molecule. Akunandaba nokuba i-polar okanye i-nonpolar. Imikhosi iya kudlala xa iamolekyu isondelene kakhulu. Nangona kunjalo, imikhosi yokusabalalisa yaseLondon ngokuqhelekileyo iyomeleleka phakathi kweamolekyu elula kwaye ibuthakathaka phakathi kweeleksile ezingabonakali kalula.
Ubukhulu bamandla buhlobene nobukhulu beli molecule. Imikhosi yokusabalalisa inamandla kunama-atom amakhulu nakakhulu kunye neamolekyu kunezona ezincinane kunye nezikhanyayo. Oku kungenxa yokuba iifowuni ze-valence zide kude ne-nucleus kuma-atom amakhulu / i-molecule kunezona ezincinci, ngoko azinjengezibophelelo ezibophelelwe kwiiponononi.
Ubume okanye ukulungiswa kwe-molecule kuyathintela ukuhlaselwa kwayo. Kufana nokudibanisa ndawonye okanye ukudlala iTetris. Eminye imilo iza kulungelelanisa ngakumbi kunezinye.
Iimpembelelo zeeLondon i-London Disterssion
I-polarizability ithinta indlela i-atom elula kunye nama-molecule afomene ngayo izibophelelane kunye, ngoko ke kuyachaphazela iipropati ezifana nenqaku lokuqhafaza kunye nenqaku lokubilisa. Umzekelo, ukuba ucinga i-Cl 2 no-Br2, unokulindela ukuba izixhobo zombini ziphathe ngokufanayo ngenxa yokuba ziihagilo zombini. Sekunjalo, i-chlorine yirhasi kwiqondo lokushisa, kodwa i-bromine iyinkunkuma. Ngoba? Iimpembelelo zeLondon phakathi kwee-athomu zebhanki ezinkulu zibenza bazivelele ngokwaneleyo ukuze benze i-liquid, ngelixa i-atyloni ezincinci zine-akrosi zinamandla okwanele ukuba i-molecule ihlale igesi.
Inkqutyana Inkcazo (i-Electron)